System Speed Booster 3.0.8.2 - .::just for share::.
Home » PC care » System Speed Booster 3.0.8.2
မင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ.ကျွန်တော်တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ နာမည်နဲ.လိုက်အောင် အစွမ်းထက်တဲ့ System Speed Booster လေးပါ မိမိတို.ကွန်ပြူတာ ရဲ. System ပိုင်းကို အလွန်အထောက်အကူပြုစေနိုင်တဲ့ကောင် လေးဖြစ်ပါတယ် အသုံးပြုရတာလဲလွယ်ကူပြီး ကွန်ပြူတာမှာရှိတဲ့ အမှိုက်များကို လျှင်လျှင်မြန်မြန်နဲ. ရှင်း လင်းပေးပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်လို. အကြိုက်တွေ.စေမှာသေချာပါတယ် နာမည်ကြီးပြီးသား ဆော့ဝဲလ်လေးမို.လဲ လူတိုင်းနီးပါးသုံးဖူးကြလို.ရှင်းပြနေစရာတောင်မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ် အထဲမှာ crack ဖိုင်လေးပါထည်.ပေးလိုက်တာကြောင့် full version အသုံးပြုရမှာဖြစ်တာကြောင့် စမ်းသုံးချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆောင်ထားချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ...............အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ